दसैँ बिदामा बैंकहरुले काउन्टर नखोल्ने, कोभिडले शाखा नखुल्दा खुलेका शाखामा भिडभाड
अरुण सापकोटा सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, १६:३५
काठमाडौं- कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्षको दसैँ बिदामा बैंकहरुले आफ्ना काउन्टर नखोल्ने भएका छन्। कोभिडको संक्रमण लगातार बढ्दै गए पछि बैंकहरुले शाखा कार्यालय नखोल्ने भएका हुन्। विगतका वर्षमा जस्तो खासै ठूलो कारोबार पनि नहुने र बैंकहरुले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेकाले यस वर्षको दशै विदामा काउन्टर खुला नगर्ने छलफल भएको बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले जानकारी दिए। अहिलेसम्म नखोल्ने भनेर आधिकारिक रुपमा निर्णय नभए पनि गएका वर्षमा जस्तो बिदामा पनि काउन्टर नखोल्ने छलफल भएको उनले बताए। उनले भने ‘अहिलेसम्मको छलफलअनुसार बैंकहरुले दसैँ बिदामा काउन्टर नखोल्ने छलफल भएको छ।’
बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई पैसा झिक्न सजिलो होस् भनेर सबै एटिएममा पैसा रहिरहने व्यवस्था गर्ने भएका छन्। पैसा झिक्न गाह्रो नपरोस् भनेर एटिएममा पैसाको मौज्दात पर्याप्त राखिरहँदा ग्राहकहरुलाई समस्या नपर्ने शर्माले जानकारी दिए। यसका साथै सामान्य कारोबार डिजिटल प्रविधिबाटै धेरै हुने भएकाले शाखा कार्यालय खोलिरहनु पर्ने बाध्यता नरहने उनको तर्क छ।
एउटा बैंकको एटिएम अर्को बैंकमा प्रयोग गर्दा पैसा नलाग्ने भएकाले ग्राहकहरुले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा गएर पैसा झिक्न सक्छन्। डिजिटल प्रविधिबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास भएकाले पैसा बोकेर हिड्नु पर्ने झन्झट पनि अहिले छैन।
गएका वर्षहरुमा दशै तिहारको विदामा पनि बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई पैसा झिक्न तथा राख्न, एलसीको कारोबार गर्न सजिलो होस भने मुख्य मुख्य शाखा कार्यालय खोल्ने गरेका थिए। निश्चित समय काउन्टर खुला गर्ने गरेकोमा यस वर्ष कोभिले कर्मचारीहरु दिन दिनै सक्रमित हुँदै गए पछि कतिपय शाखा कार्यालय पनि बन्द छन्।
दिनदिनै बैंकका शाखा कार्यालय बन्द हुने तथा खोल्ने क्रम बढिरहेको छ। कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिन बन्द हुने र संक्रमित आइसोलेसनमा बसेपछि बाँकी कर्मचारीले शाखा कार्यलाय खोल्ने क्रम बढिरहेको छ। बैंकर्स संघका अनुसार अहिलेसम्म ३२ सय भन्दा धेरै बैंकका कर्मचारी तथा उनीहरुको परिवारमा संक्रमण देखिएको छ। साढे २४ सय बैंकका कर्मचारी तथा सातसय भन्दा धेरै उनिहरुका परिवारलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो।
यो क्रम बढिरहेको छ। कर्मचारीमा संक्रमण हुनेबित्तिकै बैंकिङ सेवा सबैभन्दा पहिला प्रभावित हुने गरेको छ। कर्मचारीमा संक्रमण हुँदा उनीहरू कार्यरत शाखा नै बन्द समेत गर्नु अवस्था आएको छ। शाखा कार्यालय नै बन्द गर्नु पर्दा बैंकिङ सेवा प्रभावित हुने गरेको हो। यसले गर्दा खुलेका शाखा कार्यालयमा ग्राहकको भिडभाड बढिरहेको छ। भीड बढी हुँदा बैंकहरुलाई व्यवस्थापन नै गर्न गाह्रो परिरहेको छ। फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरु जोखिममा परेका हुन्।
ग्राहकसँग प्रत्यक्ष कुराकारी गर्ने तथा डिल गर्नुपर्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम उच्च छ। दसैँको समयमा खुद्रा नोटका लागि बैंकका पुग्नुपर्ने बाध्यताले पनि बैंकमा भिडभाड बढिरहेको संघका शर्माले जानकारी दिए।
कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण हुँदा बैंकिङ कारोबार नै प्रभावित हुने गरेको छ। शाखा कार्यालय बन्द हुँदा ग्राहकहरुले दुःख पाउने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैँका लागि नयाँ तथा खुद्रा नोटको वितरण नगर्दा सर्वसाधारणहरु बैंकको काउन्टर पुगिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको जोखिम उच्च भएको भन्दै खुद्रा नोटको वितरण रोकेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोटको प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा पुरानै नोटले काम चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट उपलब्ध नगराउदा पुराना नोटको भने अभाव नभएको शर्माले बताए। यदि ग्राहकले पुरानै नोटले काम चलाउन चाहेमा प्रयाप्त मात्रामा रहेको उनले बताए। यो समयमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट जारी गर्ने र यही समयमा नोटहरु बिग्रिने सम्भावना धेरै रहेको बैंकरहरु बताउछन्। चलन चल्तीमा दक्षिणा पनि डिजिटल प्रविधिबाट दिने संकृतिको विकास नभएकाले नोट आवश्यक परेको बैंकरहरु बताउछन्। यदि ग्राहकहरुले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सके नोट विग्रिने सम्भावना धेरै कम हुने उनिहरुको तर्क छ।
दोस्रो बजार कब्जा गर्ने 'माफिया'को प्रयास असफल, ५० वटै ब्रोकरले एउटै टिएमएस चलाउन नपाउने
तीन महिनामै जीवन बिमा कम्पनीले कमाए १ अर्ब २६ करोड
कोभिड प्रभाव : वाणिज्य बैंकहरुको नाफा २ प्रतिशतले घट्याे, मर्जरमा जानेको घटेन
चार वर्षपछि १८ सयको लाइनमा सेयर बजार सुधारका क्रममा मंगलबार नेप्से सूचक १८१०.११ अंकमा पुगेको हो। वाणिज्य बैंकहरुको सुधारबिना नै सेयर बजारमा सुधार आइरहेको छ। थोरै सेयर पु... मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
एनआईसी एशिया क्यापिटलले मंसिर १२ देखि दोस्रो खुलामुखी म्युचुअल फण्डको सार्वजनिक निष्काशन गर्दै एनआईसी एशिया क्यापिटलले नेपालमै दोस्रो खुलामुखी म्युचुअल फण्डको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने भएको छ। यस अगाडि एनआईबिएल एस क्यापिटलले पहि... मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
प्रभु बैंकका ग्राहकहरुले घरमै बसेर इलेक्ट्रोनिक्स केवाइसी भर्न पाउने प्रभु बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि इलेक्ट्रोनिक्स केवाइसी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रभु बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्ने सम्पूर्ण ग... मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
२४ घण्टायता कहाँ कति भेटिए कोरोना संक्रमित? मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
च्याम्पियन्स लिगमा आज ८ खेल : के छ हेर्न लायक? मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
सुधीर बस्नेतका पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ९४७ संक्रमित मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
एकदिन घरमै लुकाएका थिए अभियुक्तले शव, छोरालाई बाबुले नै प्रहरीमा बुझाए मंगलबार, मंसिर ९, २०७७